I-Mountain Villa - I-Planters Cottage
Indlu yodaka ibungazwe ngu-Sunitha
Imvelo futhi akukho okunye - Ibekwe endaweni eyihekthare emihlanu yehlathi lentombi elizimele esiqongweni sentaba esiqhelile, indawo esemngceleni we-Kurushumala Ashram estate ohlangothini olulodwa futhi ibheke izigodi eziluhlaza ezinombono omuhle wenyoni ezifundeni ezingu-5 zaseKerala. Ukuzola lapha kuzokusiza uphumule ingqondo, umzimba nomphefumulo wakho. Sakhe le ndawo yokuthula nokuzola ukuze ihambisane nokuzwana komhlaba, izihlahla, izinyoni, izinkanyezi nesibhakabhaka esiluhlaza.
Buyela emvelweni, emuva kokuyisisekelo. Njengoba uhlezi phezulu ezintabeni ngokubukwa okumangalisayo kuzo zonke izigodi, uzojabulela imvelo ngendlela engcono kakhulu. Njengamanje sinamakotishi amathathu. Lezi zindlu zangasese zakhiwe ngomdabu ngabadwebi bomdabu. Ngenkathi iqhubeka nokulondoloza amagugu ayo, le shede yezisebenzi eneminyaka engamashumi ayisithupha isilungisiwe futhi yavuselelwa endikimbeni nasekuhlobiseni kwe-Planter Cottage esaziwayo. Leli kotishi linikeza ubumfihlo obukhulu futhi liqhele ngamamitha angama-300 ukusuka ezindaweni ezijwayelekile
Siyaziqhenya njengendawo yokuvakasha eqaphela imvelo, i-Carbon Neutral, ekude nesiphithiphithi sabantu. Sikholelwa ekuvakasheni okuqotho okungamandla aguqulayo anamandla okuvuselela imiphakathi yendawo, ukudala amathuba emisebenzi kanye nokuvikela izindawo eziya kuzo izizukulwane ezizayo. Ezimbalwa zezinhlelo zethu ezihlanganisa ukuqashwa kwabantu bendawo, ukukhiqiza u-100% wamandla avuselelekayo ngokusebenzisa iSolar nomoya, ukulima okuphilayo, ukutholakala kwendawo, ukugwema ukusebenzisa ipulasitiki esetshenziswa kanye kanye nokuhlonipha izitshalo nezilwane ezizungezile.
I-Vagamon yaziwa kakhulu ngokuthi 'iScotland of India' etholakala emngceleni wesifunda sase-Kottayam- Idukki futhi etholakala kumamitha angu-1100 ukusuka olwandle. Isiteshi se-Vagamon hill sakhiwe ngochungechunge oluhle lwamagquma, izigodi nezimpophoma ezigelezayo ezikwenza kube indawo ekahle yokubalekela izivakashi.
Isiteshi samagquma eVagamon sakhiwe yiqoqo lezintaba ezinhle ezi-3 ezibizwa kabanzi njengeThangal hill, iMurugan hill kanye neKurismala. Umkhathi weVagamon umbozwe isimo sezulu esinenkungu nezinga lokushisa eliphakathi kuka-10 kuya ku-23 C ngesikhathi sasehlobo. I-Vagamon inomehluko wayo wokuhamba ngezinyawo, i-paragliding, ukugibela izintaba nokuqwala amatshe.
Ukuhamba emgwaqeni onguthelawayeka ombozwe esigodini esijulile kukunikeza okuhlangenwe nakho okujabulisayo ngokubona ngeso lengqondo okukhazimulayo kwemvelo. Izinto ezikhangayo ezinkulu kulesi sifunda iKurishumala 'Mountain of the holy cross', isigodlo sezindela saseKurishumala, iVagamon Meadows (Izimfunda eziluhlaza zaseVagamon), Indo-Swiss Project Diary Farms, Pine Forests, Mooppanpara (umhosha omise okwe-v) kanye neParagliding kanye Umkhosi weParagliding owenziwa kanye ngonyaka ukuze uthole uhambo.
I-National Geographic Traveller ifake i-Vagamon ohlwini lwezindawo ezingu-'50 ezikhanga kakhulu ongazivakashela e-India.
Ukuvakasha kokubuka kwasendaweni kungahlelwa ngokwesicelo.
Thina (u-Sunitha no-Alex) okwamanje sihlala eMumbai, kodwa sivakashela njalo indawo yethu yokuhlala esiyakhayo ngothando olukhulu. Sihlala sitholakala ocingweni. Umphathi wethu onobungane nonolwazi, u-Abel uyatholakala esizeni ukuze kuxhunyanwe naye futhi wazi kakhulu ngendawo futhi angakusiza nganoma yiziphi izidingo zakho.
Thina (u-Sunitha no-Alex) okwamanje sihlala eMumbai, kodwa sivakashela njalo indawo yethu yokuhlala esiyakhayo ngothando olukhulu. Sihlala sitholakala ocingweni. Umphathi wethu ono…
USunitha Ungumbungazi ovelele